ကုန်ပစ္စည်းဖြန့်ဖြူးသူနှင့်စက်ရုံမှ CNC လှည့်စက် မှအရည်အသွေးမြင့် CNC လှည့်စက် ကိုဘယ်လိုရှာရမလဲ။
ကြှနျုပျတို့မှာ Taiwan ငွေရတတ်သောသူအရည်အသွေးကိုထုတ်လုပ်သူ, ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်း, ပို့ကုန်နှင့်စက်ရုံမှာ CNC လှည့်စက် ထုတ်လုပ်ပါတယ်။ ဤမြင့်မားတော်ဝင်ရှာဖွေနေထုတ်ကုန်ကျွန်တော်တို့အဘက်ဘက်မှအထောက်အကူပြုလက်ရာများနှင့်အတူ လာ. ထုတ်လုပ်ပေးသည်။ ကျနော်တို့အပြင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖောက်သည်များကလက်ခံပြီးဖြစ်ကြောင်းထုတ်ကုန်ဖန်ဆင်းသောအတွေ့အကြုံနှင့်စွမ်းရည်ထက်မြက်သောဒီဇိုင်နာများအုပ်စုတစ်စုပိုင်ဆိုင်တယ်။ 100% ဖောက်သည်ကျေနပ်မှုရရှိရန်အတွက်ကျူးလွန်ကျနော်တို့တသမတ်တည်းမဖြစ်မီနှင့်ပြီးနောက်အရောင်းဝန်ဆောင်မှုမှာအများဆုံးဈေးသေချာစေရန်အစွန်းရောက်စောင့်ရှောက်ရမည်။
အကောင်းဆုံး CNC လှည့်စက် ကိုရှာဖွေပြီးစျေးဝယ်ရန်အတွက်သင်သည် CNC လှည့်စက် ထုတ်လုပ်သူ၊ ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူ၊ လက်ကားရောင်းသူနှင့်ဖြန့်ဖြူးသူ၊ OEM နှင့် ODM ၏အမြင့်ဆုံးအရည်အသွေးကိုသိရန်လိုအပ်သည်။ Taiwan ရှိစက်ရုံတစ်ခုမှ
CNC စက်MT-၁၀၈ မျိုးသည်ဖောက်သည်များပေါ် မူတည်၍ ကွဲပြားသော controller ကိုရွေးချယ်နိုင်သည်’စက်ရုပ်နှင့်အလိုအလျောက်တံခါးကိုအလိုအလျောက်တင်ခြင်းနှင့်ဖယ်ရှားခြင်းစနစ်သို့ရောက်ရှိရန်နှင့်လူအင်အားကုန်ကျစရိတ်ကိုသက်သာစေပြီးစက်စွမ်းဆောင်ရည်တိုးတက်စေရန်. တောင့်တင်းခိုင်မာမှုရှိသောစက်ကိုယ်ထည်သည်ရေတွင်းတစ်ခုနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုဖြစ်သည်-လူသိများဂျပန်စက်ကိရိယာစက်ရုံ. ထူးခြားချက်: ဘက်ပေါင်းစုံအိပ်ရာသည်အပြောင်းအလဲလုပ်နိုင်သည့်စွမ်းအားကို ၅ အထိအထိထောက်ပံ့သည်.၂ မီတာနှင့်အမြင့်ဆုံးလှည့်ခြင်းအချင်းသည် ၇၀၀ မီလီမီတာဖြစ်သည်. 30 နှင့်အတူအစိုင်အခဲအိပ်ရာ̊inclination ဒီဇိုင်းသည်တုန်ခါမှုမရှိကြောင်းသေချာစေသည်. ဗိုင်းလိပ်တံ၏ကြီးမားသောအချင်းသည်တင်းကျပ်မှုကိုတိုးစေသည်. C နှင့်ကိုက်ညီသောအခါ၎င်းကို angular positioning အစားစဉ်ဆက်မပြတ်တည်နေရာအတွက်သုံးနိုင်သည်-ဝင်ရိုး. သတ်မှတ်ချက်: ကုတင်ပေါ်လွှဲလိုက်သည်:570 မီလီမီတာ လက်ဝါးကပ်တိုင်လျှောကျော်လွှဲ:၃၄၅ မီလီမီတာ မက်စ်.လှည့်ခြင်း Dia.:၃၈၀ မီလီမီတာ မက်စ်.အလုပ်အရှည်:၂၆၀ မီလီမီတာ Chuck အရွယ်အစား:၈ လက်မ Tube Dia ကိုဆွဲပါ.: Ø၅၂ မီလီမီတာ Spindle Speed Range:4500 rpm ပါ Spindle နှာခေါင်း:A2-6 ဗိုင်းလိပ်တံ Hole Dia မှတဆင့်.: Ø62 မီလီမီတာ Front Bearing Dia သည်.: Ø100 မီလီမီတာ X Axis ခရီးသွား:၂၁၀ မီလီမီတာ Z Axis ခရီးသွား:၂၅၀ မီလီမီတာ မဟုတ်ဘူး.Tool station မှ:10T လမ်းညွှန်ချက်များ:Box Way စက်အလေးချိန်(N.W.):၃၅၁၀ ကီလို Standard Accessories များ:3မေးရိုးဟိုက်ဒရောလစ် Chuck:Hard claw ၁ စုံ ဟိုက်ဒရောလစ်အမြီး:နူးညံ့သောလက်သည်း ၁၀ စုံ ဟိုက်ဒရောလစ်စနစ်:စင်တာမှာနေတာလား အအေးပေးစနစ်:Chuck ညှပ်များအတွက် Foot switch သည် အလိုအလျောက်ချောဆီစနစ်:MPG လက်ဘီး အလုပ်လုပ်ရန်အလင်းပေးရတယ်:Tool box အပူထုတ်စက်:Morse ကကျဉ်းလက် ကိရိယာကိုင်ဆောင်သူ&အင်္ကျီလက်များသည်သက်ရှိပစ္စည်းအတွက်ရွေးချယ်နိုင်သည်. ငါ့မြေး&အိမ်အရောက်ပို့ပေးပါတယ်ကြာမြင့်ချိန်:ငွေပေးချေမှုကိုလက်ခံရရှိပြီးနောက်3လခန့်အာမခံချက်:ယန္တရားအတွက် ၁ နှစ်အာမခံ,ထိန်းချုပ်မှုအတွက်အာမခံချန်လှပ်ထားသည်.ကုန်သွယ်ရေးသက်တမ်း:FOB,ချင်းအမျိုးသားတပ် ဦး,CIFတင်ပို့ခြင်း:ပင်လယ်ရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေးငွေပေးချေမှု:၄၀%တီ/T ငွေပေးချေမှု；60%ပို့ဆောင်မှုမတိုင်မီလက်ကျန်ငွေအထုပ်:စံအထုပ်